सेलेक्सा बनाम प्रोजाक: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट कम्पनी प्रेस कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी कम्पनी, चेकआउट समाचार औषधि जानकारी, समाचार खेलहरु स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> सेलेक्सा बनाम प्रोजाक: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
यदि तपाईं डिप्रेसन, चिन्ता, वा अन्य शर्तहरू जसले तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ भने, तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा लाखौं अन्य बीच हुनुहुन्छ। धेरै १ million करोड अमेरिकी वयस्कहरूमा ठूलो डिप्रेशन डिसअर्डर (MDD, वा अवसाद) छ, र करीव million मिलियन वयस्कहरूले सामान्य चिन्ता डिसअर्डर गरे
सेलेक्सा (citalopram) र Prozac (फ्लुएक्सेटिन) दुई लोकप्रिय औषधि हुन् जो उदासीनता र अन्य मनोवैज्ञानिक अवस्थाहरूको लागि तोकिन्छन्। सेलेक्सा वा प्रोजाकसँग औषधी प्रयोग प्रायः मनोविज्ञानी वा मनोचिकित्सकको डाक्टरको साथ मनोचिकित्साको साथ प्रयोग गरिन्छ। दुबै एन्टीडिप्रेसस औषधिहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ।
यी औषधीहरू एसएसआरआई, वा चुनिंदा सेरोटोनिन रिअपटेक इन्हिबिटरहरू भनिने ड्रग्सको समूहको एक हिस्सा हो। एसएसआरआईहरूले दिमागमा सेरोटोनिन, न्यूरोट्रान्समिटरको स्तर बढाउँदै काम गर्दछ। यसले डिप्रेसनका लक्षणहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। जे होस् दुबै औषधिहरू एसएसआरआई हो, तिनीहरूमा केही भिन्नताहरू छन्, जुन हामी तल छलफल गर्नेछौं।
सेलेक्सा र प्रोजाक बीचको मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
सेलेक्सा (citalopram) एक एसएसआरआई औषधि हो र ब्राण्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छ। सेलेक्सा ट्याब्लेट र मौखिक समाधानको रूपमा उपलब्ध छ। सामान्य खुराक दैनिक २० मिलिग्राम हो, तर खुराक फरक हुन्छ। सेलेक्सा वयस्कहरूमा मात्र प्रयोगको लागि हो। यो बच्चाहरूमा प्रयोगको लागि अनुमोदित छैन।
प्रोजाक (फ्लोक्सेटिन) एक एसएसआरआई औषधि हो। यो दुबै ब्राण्ड र जेनेरिक फार्महरूमा उपलब्ध छ। प्रोजाक ट्याब्लेट र क्याप्सूल फारम र मौखिक समाधानमा उपलब्ध छ। यद्यपि खुराक फरक हुन्छ, एक दैनिक खुराक दिनको एक पटक २० मिग्रा हुन्छ। तलको चार्टमा सबै संकेतहरूको लागि वयस्कहरूमा प्रोजाक प्रयोग गर्न सकिन्छ। Prozac डिप्रेसनको लागि years बर्ष भन्दा बढी उमेरका बच्चाहरू वा OCD का लागि years बर्ष भन्दा पुराना बच्चाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सेलेक्सा र प्रोजाक बीच मुख्य भिन्नता
जेनेरिक नाम के हो? Citalopram फ्लुओक्सेटीन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेट, मौखिक समाधान ट्याब्लेट, क्याप्सूल, मौखिक समाधान, Symbyax रूपमा olanzapine साथ संयोजनमा
मानक खुराक के हो? २० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (खुराक फरक हुन्छ) २० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (खुराक फरक हुन्छ)
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू वयस्क र बच्चाहरू र डिप्रेसनका लागि किशोरहरू (years बर्ष भन्दा बढी पुरानो) वा OCD (old बर्ष भन्दा बढी उमेर)
सर्लेका र प्रोजाक द्वारा उपचार गरिएका सर्तहरू
सेलेक्सा (सेलेक्सा के हो?) प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डर (एमडीडी) को उपचारको लागी संकेत गरीएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले कहिलेकाँही सेलेक्सा सल्लाह दिन्छन् अफ-लेबल अन्य संकेतहरूको लागि पनि।
प्रोजाक (प्रोजाक भनेको के हो?) लाई बच्चाहरू, किशोर र वयस्कहरूमा ठूलो डिप्रेसन (MDD) र जुनूनी-बाध्यकारी डिसऑर्डर (OCD) को उपचारको लागि संकेत गरीन्छ। प्रोजाक बुलीमिया नर्भोसा, प्रिमेन्स्ट्रल डिस्फोरिक डिसअर्डर, र पैनिक डिसअर्डरको उपचारको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। Prozac7बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको लागि प्रयोगको लागि अनुमोदित छैन।
नोट: Symbyax एक संयोजन औषधि हो जसले प्रोजेक, फ्लुओक्सेटीन, र अर्को औषधी olanzapine भनिन्छ। Symbyax द्विध्रुवी I अव्यवस्थासँग सम्बन्धित अवसादग्रस्त एपिसोडहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ र उपचार प्रतिरोधी डिप्रेसनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
सर्त सेलेक्सा प्रोजाक
बुलीमिया नर्भोसा अफ-लेबल हो
Olanzapine (Symbyax को रूपमा) सँग संयोजनमा द्विध्रुवी विकारसँग सम्बन्धित अवसादग्रस्त एपिसोडहरू उपचार गर्न हैन हो
उपचार प्रतिरोधी डिप्रेसनको लागि olanzapine (Symbyax को रूपमा) संग संयोजनमा हैन हो
के सेलेक्सा वा प्रोजाक अधिक प्रभावकारी छ?
एउटा अध्ययन सेलेक्सा र प्रोजाक तुलना गर्‍यो र दुबै औषधी राम्ररी सहन पनि पाए। अध्ययनले निष्कर्ष निकाला कि सेलेक्सा डिप्रेशनको उपचार गर्न प्रोजाक जत्तिकै प्रभावकारी थियो र सेलेक्सा लिने बिरामीहरूले प्रोजाक लिने बिरामीहरूको भन्दा छिटो महसुस गर्न थाले।
TO २०१ study अध्ययन सेलेक्सा र प्रोजाक सहित २१ एन्टिडप्रेससन्टहरू समीक्षा गर्न धेरै विभिन्न क्लिनिकल परीक्षणहरू हेरे। अध्ययनले निष्कर्ष निकाल्यो कि सबै एन्टीडिप्रेसन्टहरू प्लेसबो (निष्क्रिय गोली) भन्दा बढी प्रभावकारी थिए र सेलेक्सा र प्रोजाक बढी सहनशील एन्टीडिप्रेससहरूमध्ये थिए। उनीहरूले यो पनि पत्ता लगाए कि प्रोजाक कम प्रभावकारी एन्टीडिप्रेसन्टहरूको समूहमा थियो।
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारण गर्न सक्दछ कि कुन औषधि तपाईंको लागि राम्रो हुनेछ, तपाईंको मेडिकल अवस्था (हरू) र ईतिहासको आधारमा, र कुनै पनि औषधीहरू जुन तपाईंले सेलेक्सा वा प्रोजाकसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुनेछ।
कभरेज र सेलेक्सा बनाम प्रोजाकको लागत तुलना
अधिकांश बीमा र मेडिकेयर योजनाहरूले सेलेक्सा र प्रोजाकलाई समेट्छ। जेनेरिकका लागि अप्ट इन गर्दा सम्भाव्य रूपमा धेरै पैसा बचत हुनेछ। ब्रान्ड-नाम उत्पादनहरूसँग धेरै बढी प्रतिलिपि हुन्छ वा कभर गरिएको हुँदैन।
सेलेक्सा 30०, २० मिलीग्राम जेनेरिक टेबलेटको लागि $ as रूपैयाँमा खर्च गर्न सक्दछ। तपाईले पैसा बचाउन निःशुल्क सिंगलकेयर सेलेक्सा कुपन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ - मूल्यलाई तल down low सम्ममा कम ल्याउँदै।
प्रोजाकको रिटेल लागत $ १ or वा अधिक 30०, २० मिग्रा जेनेरिक क्याप्सूलको लागि चल्न सक्छ। एकलकेयरबाट नि: शुल्क प्रोजाक कुपनको साथ, सहभागी फार्मेसीहरूमा जेनेरिक फार्मको लागि $ $ मूल्य हो।
सेलेक्सा वा प्रोजाकमा अप-टु-डेट कभरेज जानकारीको लागि तपाईंको बीमा योजनालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मानक खुराक ,०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ,०, २० मिलीग्राम क्याप्सूल
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ १। $ ०- $ २०
एकलकेयर लागत $ - $ २० $ - $ २०
सेलेक्सा बनाम प्रोजाकको सामान्य साइड इफेक्टहरू
सेलेक्साको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरू सुख्खा मुख, पसिना, मतली, पखाला, निन्द्रा वा अनिद्रा, र यौन समस्याहरू हुन्।
प्रोजाकको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुखाइ, मतली, निन्द्रा, निद्रा, भूक नपाउने, यौन साइड इफेक्ट, र घबराहट, वा चिन्ता ।
जब तपाईं सेलेक्सा वा प्रोजाकको आफ्नो प्रिस्क्रिप्शन भर्नुहुन्छ वा भर्नुहुन्छ, तपाईंले एक औषधि गाइड प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन साइड इफेक्टहरू, चेतावनीहरू, र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको बारेमा छलफल गर्दछ।
यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। अन्य गम्भीर दुष्प्रभाव हुन सक्छ। साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
टाउको दुखाई हो > २% (सहि प्रतिशत रिपोर्ट गरिएको छैन) हो एक्काइस%
कब्ज हो > २% (सहि प्रतिशत रिपोर्ट गरिएको छैन) हो %%
मतली हो एक्काइस% हो एक्काइस%
पसिना हो एघार% हैन -
स्खलन विकार / यौन रोग हो %% -6% हो % रिपोर्ट गरिएको छैन
सुख्खा मुख हो बीस% हो १०%
अनिद्रा हो पन्ध्र% हो १%%
नर्वस / चिन्ता हो %% हो १२% -१%%
स्रोत: डेलीमेड ( सेलेक्सा ), डेलीमेड ( प्रोजाक )
सेलेक्सा बनाम प्रोजेकको ड्रग अन्तर्क्रिया
Celexa वा Prozac को १ days दिन भित्रमा MAO इनहिबिटर (MAOI, वा monoamine oxidase इनहिबिटर) प्रयोग नगर्नुहोस्। संयोजनले जोखिम बढाउन सक्छ सेरोटोनिन सिन्ड्रोम , अधिक सेरोटोनिनको कारणले जीवनलाई जोखिममा पार्ने चिकित्सा आपतकालिन। ट्राइप्टनहरू — माइग्रेन औषधीहरू, जस्तै इमिट्रेक्स (सुमात्रीप्टन), साथै ईलाभिल वा सिम्बाल्टा जस्ता अन्य एन्टीडिप्रेससहरू, सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिमको कारण सेलेक्सा वा प्रोजाकसँग संयोजनमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। रबिटुसीन-डीएम र अन्य धेरै खोक्रा र चिसो उत्पादनहरूमा फेला परेको खोकीलाई दबाउने डक्सट्रोमर्थोर्फनबाट अलग रहनुपर्दछ किनकि सेलेक्सा वा प्रोजाकसँग मिसाएको खण्डमा सेरोटोनिन सिन्ड्रोम पनि हुन सक्छ।
अन्य औषधिहरू जसले सेलेक्सा वा प्रोजाकसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन् गैर-स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडीहरू) जस्तै आईबुप्रोफेन वा पेन्किलरहरू जस्तै अल्ट्राम (ट्रामाडोल)। सेलेक्सा वा प्रोजाक लिँदा मद्यपान नगर्नुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग सेलेक्सा प्रोजाक
Celexa र Prozac को चेतावनी
सबै एसएसआरआईहरू, सेलेक्सा र प्रोजाक सहित, एक छ कालो बक्स चेतावनी आत्महत्या को। एक कालो बक्स चेतावनी एफडीए द्वारा आवश्यक कडा चेतावनी हो। बच्चाहरू, किशोर-किशोरीहरू, र युवा वयस्कहरू (२ 24 बर्ष उमेर सम्म) जसले एन्टिप्रेप्रेसन्टहरू लिन्छन् उनीहरूसँग आत्महत्या गर्ने विचार र व्यवहारको जोखिम बढी हुन्छ। एन्टीडिप्रेसन्ट्समा सबै बिरामीहरूलाई होशियारी अनुगमन गरिनु पर्छ।
सेरोटोनिन सिन्ड्रोम ज्यादै खतरापूर्ण आपतकालिन हो जुन धेरै सेरोटोनिनको कारणले हुन्छ। सेलेक्सा वा प्रोजाक लिने बिरामीहरूलाई सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको लक्षण र लक्षणहरू जस्तै मतिभ्रम, दौरा, हृदय ताल वा रक्तचाप परिवर्तन, र आन्दोलनको लागि अनुगमन गरिनु पर्छ। यदि यी लक्षणहरू देखा पर्दछ भने बिरामीहरूले आपतकालीन चिकित्सा उपचार लिनु पर्छ। सेरोटोनिनको स्तर बढाउने अन्य औषधी लिने बिरामीहरू (ट्राइप्टन, ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट्स, फेन्टानेल, लिथियम, ट्रामाडोल, ट्रिपटोफन, बसपिरोन, डेक्सट्रोमर्थन, एम्फेटामिन, सेन्ट जोन्स वाउर्ट, र एमएओआई) सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको लागि बढी जोखिममा छन्।
जब सेलेक्सा वा प्रोजाक बन्द गर्दै, फिर्ती लक्षणहरू जस्तै आन्दोलन देखा पर्न सक्छ। औषधी बिस्तारै टेपर हुनु पर्छ र अचानक कहिल्यै रोकिनु हुँदैन। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई सेलेक्सा वा प्रोजाक बन्द गर्न उत्तम तरिकामा सल्लाह दिन सक्छ।
सेलेक्सा वा प्रोजाक बिरामीहरुमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ जो बिरामी छन्।
Hyponatremia (कम सोडियम) को कारण अनुचित antidiuretic हार्मोन स्राव (SIADH) को सिंड्रोम को कारण हुन सक्छ र गम्भीर हुन सक्छ। लक्षणहरूमा टाउको दुख्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाई, मेमोरी बिरामी, भ्रम, कमजोरी, र अस्थिरता समावेश हुन सक्छ, जुन झर्ने हुन सक्छ। बिरामीहरूले आपतकालिन उपचार खोज्नु पर्छ यदि लक्षण देखा पर्दछ, र एसएसआरआई बन्द गरिनु पर्छ।
उपचार नगरी anatomically स narrow्केत कोण (कोण-बन्द ग्लूकोमा) को साथ बिरामीहरुमा SSRIs त्याग्नुहोस्।
एसएसआरआईले रक्तस्राव जोखिम बढाउन सक्छ। एस्पिरिन, एनएसएआईडी, वा वारफेरिनको सह-प्रयोगको साथ रक्तस्रावको जोखिम बढ्छ।
ड्राइभ वा मशीनरी अपरेट नगर्नुहोस् जबसम्म तपाईंलाई थाहा हुँदैन कसरी सेलेक्सा वा प्रोजाकले तपाईंलाई असर गर्छ।
किडनी समस्या भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ सेलेक्सा वा प्रोजाक प्रयोग गर्नुहोस्।
विरलै अवस्थाहरूमा, त्यहाँ पुराना र एलर्जी प्रतिक्रिया / प्रणालीगत एनाफिलेक्सिस प्रतिक्रियाहरू छन्, जुन घातक थिए। यदि तपाईं दाग वा एलर्जीको लक्षण अनुभव गर्नुहुन्छ भने, सेलेक्सा वा प्रोजाक लिन रोक्नुहोस्, र तत्काल चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्।
सेलेक्सा वा प्रोजाकले क्यूटी लामो र वेंट्रिकुलर एरिथिमिया निम्त्याउन सक्छ, जुन जीवनलाई जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। केहि बिरामीहरूलाई चिकित्सा अवस्था वा अन्य औषधीको कारण उच्च जोखिम हुन्छ। आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् यदि सेलेक्सा वा प्रोजाक तपाईंको लागि सुरक्षित छ।
सेलेक्सा वा प्रोजाक गर्भावस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि आमालाई फाइदा बच्चामा हुने जोखिम भन्दा बढी छ। औषधी रोक्दा डिप्रेसन वा चिन्ताको फड्को हुन सक्छ। बिरामीहरूलाई केस-द्वारा-केस आधारमा मूल्या should्कन गर्नुपर्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले गर्भावस्थामा एसएसआरआई प्रयोग गर्दा हुने जोखिम र जोखिमको तौल लिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो त्रैमासिकमा एसएसआरआईमा देखा परेका नवजातहरूले लामो समयसम्म अस्पतालमा भर्ना हुनु, श्वासप्रश्वास समर्थन, र ट्यूब खुवाउन जटिलताहरू विकास गरेको छ। यदि तपाईंले सेलेक्सा वा प्रोजाक लिइसक्नुभयो र तपाईं गर्भवती भएको पत्ता लगाउनुभयो भने, निर्देशनको लागि तुरून्त तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
सेलेक्सा बनाम प्रोजाकको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
सेलेक्सा भनेको के हो?
सेलेक्सा एक एसएसआरआई हो (चयनित सेरोटोनिन रिअपटेक अवरोधक)। सेलेक्सा वयस्कहरूमा उदासीनता व्यवहार गर्दछ। सेलेक्साको जेनेरिक नाम सिटालोप्राम हो।
प्रोजाक एक एसएसआरआई वा चयनित सेरोटोनिन रिअपटेक अवरोधक हो। प्रोजाकले डिप्रेसन, ओब्जेसिभ-कम्पल्सिव डिसअर्डर, बुलिमिया नर्भोसा, प्रीमेन्स्ट्रियल डिस्फोरिक डिसअर्डर, र पैनिक डिसअर्डरको व्यवहार गर्दछ। Prozac ब्रान्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छ। प्रोजाकको जेनेरिक नाम फ्लुओक्सेटीन हो।
के सेलेक्सा र प्रोजाक एकै हो?
सेलेक्सा र प्रोजाक दुबै एसएसआरआई औषधि हो। त्यस्तै, ती समान छन् तर वास्तवमा समान छैन। उनीहरूसँग केही भिन्नताहरू छन्, जसरी माथि वर्णन गरिए। अन्य एसएसआरआई ड्रग्स जसमा तपाईंले सुन्नु भएको हुन सक्छ लेक्साप्रो (एसिटालोप्राम), लुभोक्स (फ्लोभोक्सामिन), पक्सिल (प्यारोक्सेटिन), र जोलोफ्ट (सेर्टरलाइन)।
तपाईंले सुन्नु भएको अर्को एंटीडप्रेसन्ट ड्रग्सहरू हुन्- सेरोटोनिन र नोरपाइनफ्रिन रिअपटेक इन्हिबिटरहरू (एसएनआरआई), जसमा साइम्बाल्टा (ड्युलोक्सेटिन), एफफेक्सोर (भेन्लाफैक्साइन), र प्रिस्टिक (डिसेभेन्फाक्सिन) पर्छ।
के सेलेक्सा वा प्रोजाक राम्रो छ? / Prozac सेलेक्सा भन्दा बढी प्रभावी छ?
क्लिनिकल अध्ययनका अनुसार (माथिको खण्ड हेर्नुहोस्) दुबै औषधिहरू प्रभावकारी र राम्ररी सहन गरिन्छ। किनकि व्यक्तिले बिभिन्न औषधोपचार लाई फरक फरक पार्दछ, तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारित गर्न मद्दत गर्न सक्छ कि सेलेक्सा वा प्रोजाक तपाईको लागी एक उचित औषधी हुन सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा सेलेक्सा वा प्रोजाक प्रयोग गर्न सक्छु?
चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। ऊ वा उनी एक को फाइदाहरू तौल हुनेछ एन्टीडिप्रेसन्ट बनाम बच्चालाई जोखिम । नवजात शिशुहरुमा एन्टिडिप्रेसेन्टहरु लाई सम्पर्क गरीएको छ, एसएसआरआई सहित, गर्भावस्थाको तेस्रो तिमाहीमा, गम्भीर जटिलताहरु विकास भएको छ।
यदि तपाईं पहिले नै सेलेक्सा वा प्रोजाक लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने सल्लाहको लागि तुरून्त तपाईंको OB-GYN बाट परामर्श लिनुहोस्। यदी तिमी स्तन पान , आफ्नो OB-GYN साथै परामर्श गर्नुहोस्।
के म सेलेक्सा वा प्रोजाक रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
होईन। सेलेक्सा वा प्रोजाक रक्सीको साथ जोड्नुहुँदैन। संयोजनले श्वासप्रश्वासको उदासीनताको जोखिम बढाउन सक्छ - सास फेर्न ढिलो भइरहेको छ, पर्याप्त अक्सिजन पाइरहेको छैन - र बेहोरापन र निन्द्रा र कमजोर सतर्कता बढाउन। संयोजन पनि चिन्ता र / वा निराशा बढ्न सक्छ।
सिटालोप्राम र फ्लुओक्सेटाइन एकै चीज हो?
Citalopram Celexa को सामान्य रूप हो, र फ्लुओक्सेटीन Prozac को सामान्य रूप हो। दुबै औषधिहरू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्सको एसएसआरआई कोटीमा छन्। ती समान छन्, तर वास्तवमा उस्तै छैन। उनीहरूसँग केही भिन्नताहरू छन्, जसरी माथि वर्णन गरिए।
कुन antidepressant को कम से कम दुष्प्रभावहरु छन्?
सबै antidepressants को सम्भावित साइड इफेक्टहरू छन्। चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। केही बिरामीहरूले सेलेक्साका साथ ठूलो महसुस गर्छन्, जबकि अरूहरूले प्रोजेकसँग राम्रो गर्छन्। सबैजनाको उपचारको लागि फरक प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसैले तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दछन्।
के सेलेक्सा चिन्ताको लागि राम्रो छ?
सेलेक्सा हाल केवल डिप्रेसनमा प्रयोगको लागि अनुमोदित छ। धेरै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले चिन्ताका लागि सेलेक्सा अफ-लेबल लेख्छन्, यद्यपि। आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सोध्नुहोस् यदि सेलेक्सा तपाईं को लागी उपयुक्त छ।
के रातमा सेलेक्सा लिनु राम्रो हो?
निर्धारित जानकारी अनुसार, तपाईं बिहान वा बेलुका सेलेक्सा लिन सक्नुहुन्छ। यो एक समय छनौट गर्नु उत्तम हो जुन तपाईले बिर्सनु हुन्छ प्रत्येक दिन झण्डै उहि समयमा तपाईको औषधि लिन। यदि औषधीले तपाईंलाई थाक्छ भने, तपाईं यसलाई रातमा लिन कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ।
के सेलेक्सा तपाईंलाई यौन असर गर्न सक्छ?
हो, सम्भवतः। सेलेक्सा (र एसएसआरआईहरू, प्रोजाक सहित, पनि) छ यौन साइड इफेक्ट । सेलेक्साले पुरुष र महिलामा कामवासना र पुरुषमा स्खलनलाई असर गर्न सक्छ। SSRIs ले priapism (एक अनावश्यक, पीडादायी, लामो निर्माण) को कारण पनि गर्न सक्छ। यद्यपि, सबै बिरामीहरू जसले एसएसआरआई लिन्छन् यौन यौन प्रभावित हुँदैनन्। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग खुल्ला कुराकानी राख्नुहोस् ताकि यदि तपाईले एसएसआरआई लिँदा यौन साइड इफेक्टको अनुभव गर्नुभयो भने, यदि उसले आवश्यक परेमा तपाईको औषधि परिवर्तन गर्न सक्दछ।
के तपाइँ tamiflu लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ एक फ्लू शट थियो
कम रक्त शर्करा स्तर चार्ट के हो
यदि तपाइँ मुटुको समस्या छ भने लक्षण के हो
फ्लू भाइरस हावा मा कति समय सम्म रहन्छ?